inMotionNow mandefa ny fizotran'ny asa an-tserasera amin'ny alàlan'ny mailaka marketing | Martech Zone
inMotionNow, mpamatsy vahaolana amin'ny fitantanana workflow ho an'ny ekipa marketing sy famoronana, namoaka ny fanavaozana farany ny vokatra, inMotion, ao anatin'izany ny vaovao endri-javatra famerenana ho an'ny mailaka marketing sy UX / UI amin'ny taranaka manaraka.
Ny fitaovana fandinihana mailaka dia ahafahan'ny mpampiasa manodina mailaka avy amin'ny sehatry ny varotra mailaka safidiny mankany amin'ny inMotion hojerena sy ekena. Ny ekipa mpivarotra sy mamorona dia tsy mikatona intsony amin'ny fanomezana sy fandraisana hevitra momba ny fampielezan-kevitra amin'ny mailaka noho ny kofehy mailaka. Raha tokony ho izy dia azon'izy ireo ampiasaina fotsiny ny hevitry ny inMotion, ny fiaraha-miasa ary ny endri-javatra fankatoavana hanamarihana ireo mailaka toa ny nanaporofoany fa voaporofo.
Zava-nisongadina tamin'ny fizahana ny mailaka an-tserasera:
Hevitra haingana kokoa: Ireo mpampiasa dia afaka mandefa mailaka fanandramana mivantana avy eo amin'ny sehatry ny marketing amin'ny mailaka mankany amin'ny inMotion, izay ampiakarina miaraka amin'ny fampahalalana momba ny fampielezan-kevitra ny mailaka ary aseho amin'ny toe-javatra iray ho toy ny porofo iray izay hampandehanana ny fizahana sy ny fankatoavana.
Lahatsoratra manodidina: Ankoatry ny famoahana ny votoatin'ny mailaka ao amin'ny tontolon'ny fandinihana an-tserasera, ny InMotion dia manolotra ireo mpitsikilo miaraka amin'ny fampahalalana manan-danja ihany koa ho an'ny mailaka tsirairay, toy ny tsipika misy ny lohahevitra, ny daty fandefasana, ary ny mpihaino kendrena, izay azon'izy ireo asiana marika na ekena.
Valin-kevitra mazava kokoa: Ny fampiasana inMotion ho an'ny fankatoavana amin'ny mailaka dia midika hoe manalavitra ny tolona hanazavana ny hevitr'izy ireo momba ny mailaka fanandramana tao anaty boaty ny mpandinika fa tsy hampiasa fitaovana fandinihana tsotra sy intuitive ao anatin'ny tontolon'ny fanandramana an-tserasera mba hanomezana hevitra sy marika mora vakiana.
Fankatoavana eny an-dalana: Miaraka amin'ny rindrambaiko fandinihana finday inMotion, azon'ny mpampiasa ekena haingana ny porofo amin'ny mailaka na aiza na aiza no ampiasainy 'ankihibe' na 'ankihibe.'
Ankoatry ny famerenana amin'ny mailaka, inMotionNow dia manana endrika sy fahatsapana vaovao ao anatin'ny inMotion. Nosamborin'ny fitsipiky ny famolavolana fitaovana mahazatra, ny UX / UI ho avy, namboarina manokana ho an'ny ekipa marketing sy mpamorona mba hanafainganana ny fananganana sy hitarika ny fahombiazan'ny fikambanana. Ny traikefan'ny mpampiasa intuitive dia natao ho an'ny mpampiasa ny fahaizana teknolojia rehetra, manome fidirana mora kokoa amin'ireo fiasa.
Nanolotra loharanom-pahalalana lehibe tsy tapaka izahay amin'ny famolavolana vokatra tsy tapaka mba hitazomana ny toeran'ny mpitarika tsena ao anatin'ny sehatry ny fitantanana workflow mamorona. Ireo fanavaozana farany ireo dia vao mainka mampiorina ny inMotion ho vahaolana arak'asa tsara indrindra amin'ny sokajy. CEO ao amin'nyMotionNow Ben Hartmere.
Miaraka amin'ireo singa mitambatra izay mampita ny fangatahana anaty tetikasa, tetikasa ho porofo ary porofo ho fankatoavana farany, ny InMotion dia misoroka ny fahasarotan'ireo fitaovana fitantanana tetikasa ankapobeny, fa tsy mifantoka amin'ny fampisehoana marketing sy ny mpampiasa famoronana dia mila mandroso hatrany ny atiny.
inMotionNow dia mpamatsy vahaolana lehibe amin'ny fitantanana ny dalam-piasa ho an'ny ekipa marketing sy famoronana, manamora ny fahombiazana sy ny famokarana manomboka amin'ny tetikasa kickoff ka hatramin'ny fankatoavana farany. inMotion, ny sainam-bokin'ny orinasa SaaS, dia manamora ny dingana rehetra amin'ny fizotran'asa famoronana, manome lanja azo refesina amin'ny mpanjifa orinasa manerantany. Ny fampiharana dia mamela ny mpandray anjara amin'ny tetikasa hitantana, hanara-maso ary hiara-hijery ny tetikasan'izy ireo amin'ny pirinty, horonan-tsary ary mailaka amin'ny tontolon'ny Internet. Miaraka amin'ny interface interface-friendly sy ny ekipa fahombiazan'ny mpanjifa natokana ho an'ny mpanjifa, InMotionNow dia manampy ny ekipa mpamorona sy marketing isan-karazany hanao ny asa tian'izy ireo ary hanamboatra ny ambiny.
Tags: fankatoavanafankatoavana mailakafiaraha-miasa amin'ny mailakafizotry ny mailakasehatra fandinihana mailakainmotioninmotionnowfankatoavana dingana